China ihowuliseyili High Quality Camo Luhlala Hunting Sport yangaphandle Drawstring ubhaka mveliso kunye nabenzi | USunnan
Ihowuliseyili Quality Camo Luhlala Hunting Sport yangaphandle Drawstring ubhaka
Le ngxowa ye-camo ilungele ukuhamba intaba, ukubaleka, ukuhamba ngebhayisikile, ukuhamba, ukugxumeka inkampu, ukunyuka, ukuloba, ukuhamba, ukukhwela ibhayisikile, iklabhu kunye neminye imisebenzi yezemidlalo.
Inombolo yomzekelo: I-SN-B1103
Umbala: Sifihle okanye ngentando yakho
Izinto: Ipholiyesta ye-210D
Ubukhulu: 45 * 34cm
Ilogo: Elungiselelweyo Ilogo Yamkela
Igama lemveliso Ihowuliseyili High Umgangatho Camo Luhlala Hunting Sport yangaphandle Drawstring Bakpack
Inombolo yomzekelo I-SN-B1103
Izinto eziphathekayo Ipholiyesta ye-210D
Umbala Mfusa okanye wena
Ubungakanani 45 * 34cm
Ukusetyenziswa Iklabhu, inkampu, ukunyuka intaba, ukuhamba, njl.
Ukukhanya okuKhanyayo Ubungakanani obufanelekileyo Ubhaka ubhaka ubhaka ubungakanani be-45 * 34cm. Ilungele iipakethe zepati kunye neziganeko zangaphandle okanye imisebenzi. Ingena kwiibhotile zamanzi kunye nokutya okulula kwiminyhadala yezemidlalo okanye elunxwemeni. Ezi ngxowa zidayayi zibamba ngokulula iselfowuni, izinto ezincinci zombane, ibhotile yamanzi, izitshixo kunye nokutya okulula!
Iyahlala -Ezi ngxowa zeCamo Cinch zenziwe ngePolyester eyi-210D, yomeleza iikona zePolyurethane ezinamajelo esinyithi ongezelelweyo, kunye neentambo ezinepolypropylene Drawstring. Ingxowa enzima yomthwalo onzima xa uhambisa iziselo, amashwamshwam, iimpahla, izihlangu nokunye okuninzi!
Uninzi-Purukuma -Fumana ukusetyenziswa okuphezulu kwiingxowa zethu zomtya weCamo. Ukufezekisa imisebenzi emininzi, enje ngeGym, iYoga, Ukuqubha, ukuQeqesha, iMidlalo, uLwandle, ukubaleka, ukuhamba intaba, ukukhempisha, ipikniki, uhambo, uhambo losuku, ukuthenga, ukulala ebusuku, iibhegi zesikolo iibhegi Njl. Abahlobo.
Imitya ukhululekile -Uya kukuthanda ukuguquguquka kwale pakethi yomtya. Imizobo ehlengahlengiswayo inokulingana abantu abadala kunye nolutsha. Uyilo lobhaka luyakwazi ukukhulula izandla zakho, kwaye imitya eyomeleleyo eshinyeneyo iyakuthintela ekumbeni emagxeni akho kwaye uncede ukunciphisa uxinzelelo lwakho. Ukuthuthuzela ukuKuthwala kwaye kufaneleke kakhulu kubafundi abaFikisayo nabaFikisayo.
Ukuhlanjwa ngomatshini -Yenza ungaze ube nexhala lokuba ungawugcina njani ubhaka wakho womtya xa ungcolile, ubile okanye umanzi. Yise kwindawo yokuzivocavoca, elwandle, uqubha kwaye ukonwabele ixesha lakho langaphandle kunye nobomi bezemidlalo.
Inkonzo eyenzelwe -Kwiimeko ezininzi, imibuzo okanye amathandabuzo akho, kunye neminye imibuzo emva kwentengiso, ingathunyelwa kuthi nge-imeyile, eya kuthi iphendulwe okanye isonjululwe kwisithuba seeyure ezingama-24 ukuqinisekisa ukuba uyakonwabela ukuthenga ngokugqibeleleyo.
Egqithileyo Ukuprintwa okuPhezulu okuPhathekayo okuSebenzayo okuTsala iBhegi yeCinch Bag
Okulandelayo: Ukuprintwa kweBack Bag yaseKhaya eyenzelwe wena
camo ibhegi yomtya
Iibhegi zokutsala zesiko